Iskaashatada Ganacsiga iyo ArtsFund waxay ku deeqayaan $ 10 milyan oo deeq ah si looga caawiyo ururada bulshada ee aan macaash doonka ahayn - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsi iyo ArtsFund oo bahwadaag la ah inay bixiyaan $ 10 milyan oo deeq ah si looga caawiyo ururada bulshada ee aan macaash doonka ahayn
Xariirka arjiga deeqda bulshada ee aan macaash doonka ahayn ayaa laga furayaa 10ka Maajo ururada xaq u leh ee gobolka Washington
OLYMPIA, WASH - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay la shaqeeyneysaa ArtsFund si ay u bixiso in kabadan $ 10 milyan oo deeqo ah si loo caawiyo ururada bulshada ee gobolka oo dhan oo uu saameeyay aafada. Barnaamijka deeqda bulshada ee aan macaash doonka ahayn wuxuu diirada saaraa farshaxanka, dhaqanka, sayniska iyo hidaha, iyo sidoo kale ururada hadafkooda koowaad yahay u adeegida halyeeyada, ururada deriska iyo barnaamijyada isboortiga iyo madadaalada ee dadka waaweyn iyo / ama caruurta.
Hay'adaha u qalma waa inay lahaadaan 501 (c) (3) xaalad, ama kafaala qaad maaliyadeed 501 (c) (3), oo wata dukumiintiyo ku habboon tan iyo sanadkoodii maaliyadeed ee 2019. Intaa waxaa sii dheer, ururradu waa inay leeyihiin miisaaniyado ay ku shaqeeyaan ugu yaraan $ 25,000.
Faahfaahin buuxda iyo Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo ayaa la heli karaa halkan.
"Ururada aan macaash doonka ahayn waxay xoojiyaan bulshada iyagoo siinaya fursado dhaqan, hal abuur, madadaalo iyo waxyaabo kale oo kobcin ah iyo isku xirka dadka iyo kuwa kale ee danta guud leh," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. Tani waxay si gaar ah run u noqotay xilligii masiibada. Dadku waxay raadinayaan qaabab ay ku ilaaliyaan isku xirnaanta bulshada iyo dhaqanka ururadan aan macaash doonka ahayna waxay bixiyaan isku xirka muhiimka ah. ”
Brown wuxuu intaa ku daray in faa'iido-darrada ay si gaar ah u saameeyeen aafada, iyo soo-kabashadooda ayaa muhiim u ah dib-u-soo-kabashada dhaqaale ee buuxda iyo sinnaanta guud ahaan gobolka Washington.
"Waaxda Ganacsiga iyo ArtsFund labaduba waxay fahmayaan sida ay udub dhexaadka uhelay soo kabashada waaxda aan faa'iido doonku u ahayn guud ahaan dhaqaalaha gobolka iyo soo celinta shaqooyinka," ayuu yiri Michael Greer, Madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee ArtsFund. “Cudurka faafa wuxuu isu keenay qaybaha kala duwan ee aan macaash doonka ahayn si loo badbaadiyo. Iskaashigan xiisaha leh ee Ganacsigu wuxuu fursad u siinayaa ArtsFund fursad aan ku dhisno aqoonteenna jirta iyo kalsooni aan ka dhex abuurno farshaxanka aan faa'iido doonka ahayn, dhaqanka, sayniska iyo hiddaha iyo ballaarinta gaarsiinteena si aan ugu adeegno isboorti bulshada ku saleysan, madadaalo, halyeeyo iyo ururada deriska ah ee gobolka oo dhan. . ”
Xariirka arjiga deeqda bulshada ee aan macaash doonka aheyn wuxuu furmayaa 10ka Maajo markay tahay www.artsfund.org/ncrgrants. Codsiyada waa onlayn oo keliya.
Waxaa si xoog leh lagula talinayaa in ururada daneynaya ay sahamiyaan website goor hore si loo go'aamiyo u-qalmitaankooda iyo dib-u-eegista shuruudaha dalabyada iyo Su'aalaha la Weydiiyo. Ururada ay hogaamiyaan iyo / ama u adeegaan bulshooyinka dhaqaalahoodu hooseeyo, dadyowga dhaqamada kala duwan iyo kooxaha aan matalin ayaa lagu dhiirigelinayaa inay codsadaan.
Webinar wargelin ah May 11
Kulan macluumaad internetka ah ayaa la qaban doonaa Maajo 11, 2021 laga bilaabo 2-3: 00 pm. Si aad uga qayb gasho webinar, fadlan iska diiwaangeli xiriirkan. Webinar-kan ayaa la duubi doonaa oo si otomaatig ah u soo saari doonaa cinwaanno, iyo turjumaadda ASL ayaa la bixin doonaa.
Xariirka arjiga ayaa xirmi doona 24-ka Maajo waxaana deeqaha la filayaa in la bixiyo horraanta ilaa bartamaha Juun.
FarshaxankaDeeqaha bulshada iyo amaahdadeeqoWar-saxaafadeed
← Ganacsiga wuxuu sii daayaa Heer cusub oo Hormarin Waara ah ee Evergreen Xisaabi tirada maalmaha u dhexeeya maanta iyo taariikh kale →